NAFAQEYNTA DIGAAGA BASHKIR EE GURIGA: DAYACTIRKA IYO DARYEELKA - CALEEMAHA DHASHA
Ugu Weyn Ee Caleemaha dhasha
Dhammaan waxyaalaha ugu muhiimsan ee ku saabsan digaagaha Bashkir ee guriga
Duck Bashkir waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah noocyada ugu fiican ee ukunta iyo hilibka. Intaa waxaa dheer, waxa aan la qabin ee daryeelka, raqiis ah oo waxaa lagu gartaa difaac adag iyo dulqaad. Tilmaamaha sii kordhaya ee Duck Bashkir, faa'iidooyinkeeda iyo faa'iido darrida ayaa looga doodi doonaa arrintan.
Aqoonta digaaga waxay ka bilaabataa sharaxaad kooban. Isla markiiba, waxaannu xusuusan nahay in jahawareerka "Bashkir" ay la socdaan shimbiro kale oo adag, sababtoo ah waxay leedahay midab caan ah oo dhisto.
Sifooyinka dibedda ah
Duck Bashiir wuxuu leeyahay dhismo adag, daboolka muruqyada, kuwaas oo si kala duwan u kala fog. Waxaa si sahlan loo aqoonsan karaa madaxa madaxiisa, qoorta gaaban, qoorta dheer iyo dabacsan. Baalalka si adag ayaa loo riixay jidhka.
Shimbir ayaa ku jirta laba midab:
madow iyo caddaan;
Dumarka waxay xirtaan boomaato xoog leh marka loo eego dumarka. Waxay u muuqdaan kuwo la mid ah qaraabadooda duurjoogta ah. Celcelis ahaan, drakes gaarayaa tiro ah 4 kg, shinbir - 3.5 kg. Kaydinta fatahaada inta ay ku jiraan wax yar. 70% miisaanka waa hilib saafi ah. Waa wax lafdhabarka ah, oo aan caadi ahayn oo qandaraas leh oo aan udambayn karin duck Bashiir.
Shimbiraha si dhakhso ah ayey u koraan - waxay gaadhaan miisaanka ugu sarreeya 2-2.5 bilood.
Ma taqaanaa? Sida magacu tilmaamayo, shimbiraha ayaa dhab ahaantii loo soo ridayaa Bashiiriya. Si kastaba ha ahaatee, waxay u soo jeesteen maadaama ay ka dhalatay tijaabooyin gaar ah, laakiin waxay u badan tahay shil. Dhirta beeraha Blagovarsky, ayaa waxay ka shaqeeyeen sidii loo hagaajin lahaa duufaan cad, iyo si lama filaan ah, natiijada isbeddellada, shimbiraha quruxda badan leh ee dhismaha xooggan ayaa dhashey. Dhab ahaantii, saynisyahannada ayaa isbeddelaya, iyo midabka ayaa lagu naaneeso midabkoodu yahay Bashiir.
Iyadoo wax soo saar leh, Bashiir waxay leedahay heerar sare - hal naas oo ah xilliga 40ka maalmood ee wax soo saar leh waxay celin karaan celcelis ahaan 200 illaa 225 ukun. Ukun kasta oo culeyskiisu yahay 80-90 g.
Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrida caanaha
Aqoonta loo yaqaan 'duck Bashkir' iyo sharaxaadda caleemaha ayaa ah mid aan dhammeystirnayn haddii faa'idooyinka iyo khasaarooyinka aan la tixgelin. Marka hore, habka, inta badan.
Iska hubi noocyada kale ee shimbiraha ee loogu talagalay taranta guriga: Mandarin Duck, Musky, Mulard Duck.
Faa'idooyinka "Bashiir" waxaa ka mid ah:
heerka sare ee hatchability of ducklings - 78-80%;
koritaanka degdegga ah iyo korodhka miisaanka;
Qalabaynta degdegga ah iyo helitaanka xaalad kasta;
daryeelka iyo dayactirka sahlan;
soosaarka ukunta wanaagsan;
ukunta waaweyn oo ah qaabka saxda ah ee loo rogay;
ukumaha kaloriinta - 185 kcal halkii 100 g;
Hilibka dufanku ku yar yahay ee hilibka - 1.8-3.9%;
hilib tayo leh, dhadhan fiican, hilib jilicsan;
Kharashka aan kharashka ahayn ee cuntada - 2.73 unug / 1 kg koritaanka;
ku habboon beerashada beeraha waaweyn iyo kuwa yaryar, kuwa jecel iyo beeraleyda digaaga ee xirfadlayaasha ah.
Faa'iidada kale ee muhimka ah ee taranka waa tusaha marka ducks Bashkir ay bilaabaan inay duulaan. Waxaa loo aqbalaa qaadashada ukumaha 4 bilood. Wax soo saarka ukunta iyo miisaanka way kala duwan yihiin waxayna kuxirantahay midabka duck. Khaki ayaa heysta wax soo saarkiisa iyo miisaankiisa oo ka sarreeya wakiillo madow iyo caddaan ah oo ka mid ah taranka. Sidaas, marka hore waxay siin kartaa 217 ukun, halka labaadna - 228.
Dumarka Bashkir waxay heleen wax ka badan 80% miisaankooda bilaha ugu horreeya ee nolosha.
Ma taqaanaa? Nabarada duurjooga kuma jiraan dhuunta xididada iyo xididdada dhiigga; markay socdaan, ma dareemaan heerkul qabow ama kulul..
Waxyaabaha hoos u dhaca ah ee daaqadaha Bashiir waa sifooyinka soo socda:
baahida loo qabo in biyo la nadiifiyo oo kaliya, sababtoo ah haddii kale waxaa jiraya cudur;
dulqaad la'aanta ilaa heerkul sarreeya;
macaamilka uureysiga iyo cayilka.
Haynta Ducks Bashkir waa sahlan tahay, iyo novices ayaa qaban kara hawshan. Waxa ugu muhiimsan waa in la helo macluumaad ku saabsan qaar ka mid ah shucuurta xannaaneynta iyaga. Qolka Baqshiish, qalalan, baqshiicsan oo daboolan iyo qalimaan aan lahayn hindisaha nolosha ayaa ku habboon in lagu noolaado. Dhulka daadadka waa inuu ahaadaa ugu yaraan 20 cm dhulka. Waa inay noqdaan kuwo xoog leh si ay jeexjirayaashu u gashadaan.
Heerkulka In qolka shimbiraha la dhigo, xilliga qaboobaha waxaa lagama maarmaan ah in lagu hayo heerkulka aan ka yareyn +7 ° S, si fiican - heerkul ah + 15-20 ° S. Xilliga xagaaga waa inay ahaato mid qabow, sida shimbiraha u diidaan kuleylka. Calaamadaha soo socda ayaa tilmaamaya in ay kulul yihiin:
isticmaalka badanaa biyaha;
si joogta ah u fur furka;
la'aanta cunto xumo;
Haddii calaamadaha noocan ah la arko, heerkulku wuxuu u baahan doonaa in la yareeyo, haddii kale shimbiraha ayaa sii xumaanaya. Nalalka Markaad qalabeysid meesha ducks ku haysato waxaad u baahan tahay inaad ka walwasho nalalka saxda ah. Iftiinka waa inuu galaa ugu yaraan 14 saacadood maalintii. 1 kiiloomitir. Murgalka laydhka dhulka ayaa loo baahan yahay 5 watts. Lamps waa in lagu doortaa dib uqorayaasha.
Marka laga reebo shimbiraha, digaagga, turkiga, iyo berriga, shimbiraha qotoda dheeraadka ah ayaa badanaa ka caan ah qoysaska: xayawaanka, duurjoogta, boorashka, iyo pheasants.
Meesha socodka. Wixii dukumintiyada xafladaha waxay u baahan yihiin meel ballaadhan, oo lagu daboolo cawska, ama xaaladaha ba'an, ciid. Waxay noqon laheyd mid fiican haddii ay haystaan ​​kaydka ay u isticmaalaan. Waxaad si fudud u rakibi kartaa taangiyo waaweyn oo biyo ah, halkaas oo ducks ay kor u kici doonto. Joogitaanka biyaha ku dhow ayaa saameyn togan ku leh koritaanka iyo horumarinta shimbiraha - kobaca iyo korodhkooda miisaankooda.
Waxyaalaha cufnaanta. Xilliga xagaaga, horumarinta caadiga ah, tirada dadka qaangaarka ah ee 1 dabaq ah. M waa inuusan ka badnayn 2-3. Ducklings oo kaliya dhashay lagu hayn karaa 18-20 halkii 1 dabaq ah. m Saddex bilood oo da 'yar oo leh joogitaan ka badan 10-12 ducklings halkii kiilomitir. m waxay noqon doonaan kuwo aan raaxo lahayn oo gariiraya. Dhammaadka labada bilood, shimbiruhu waxay ku habboon yihiin ujeedo hilib.
Waa muhiim! Waxaa lagugula talinayaa inaad sii haysatid ducks keliya ilaa 4 bilood. Ka dib markaa, iyagu ma sii koraan oo miisaankana koraan. Intaa waxaa dheer, waxay bilaabaan in ay molt.
Quudinta Dufanka Dadka Waaweyn
Muuqaalka khaaska ah ee ducks waa in ay leeyihiin mindhicirka gaaban. Tani waxay si toos ah u saameeysaa dheef-shiid kiimikaad iyo tirada quudinta. Cunnada shimbiraha ayaa si dhakhso ah loo shaqeeyaa, sidaa daraadeed waxaa lagula talinayaa inay ku quudiyaan ugu yaraan 3 jeer maalintii, laakiin qaybo yaryar.
Laga soo bilaabo feed ee for ducks Bashkir yihiin ku habboon:
silage (caleemaha qallalan ee cawska, kaabajka, karootada, bocorka);
khudradda xididada la jarjaray;
Quudinta subixii waa suurad wacan si ay u soo saarto mash qoyan. Habeenkii - si aad u siiyaan hadhuudh (ka fiican oo ka biqin), quudiyo.
Si loo gaaro wax soo saarka ukunta ugu wanaagsan, waxaa wanaagsan in la cuno shimbiraha leh silo isku dhafan: Cuntada cawska (hal jumlad), kaabajar (saddex gogo '), caleemo kaabaj ah (lix gogo'). Hilibka ugu wanaagsani waa la heli karaa haddii raashinka ducks ee caadiga ah la kariyo. Waxaad u baahan tahay inaad gasho 2 toddobaad. Isku darku waa inuu si joogta ah u joogaa nuujiyaha.
Waa muhiim! Saamaynta noocyada quudinta ee cunto ah ee quudinta Ducks siraha Bashiir waa suurad wacan sida soo socda: hadhuudh - 45% isku darka cuntada - 55 %.
Xaaladda qasabka ah waa joogitaanka khamriga iyo isbeddelada isbeddelada biyaha ee ku yimaada (dhowr jeer maalintii). Biyaha waa inay nadiif ahaadaan. Hal nuug maalin kasta waxay u baahan tahay ugu yaraan 2 litir oo dareere ah. Haddii kale, shimbiruhu waxay la kulmi doonaan dhibaatooyin xagga shucaaca iyo shaqada xiidmaha.
Nafaqeynta iyo faraca
Wixii koritaanka "bashkirok", sida caadiga ah, kumbuyuutar looma baahnaKadib dhammaantiis, dheddigku waa jilicsanaan wanaagsan oo leh dareenka hooyada si fiican u horumarsan. Sidaa daraadeed, hannaanka ducklings iyo dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah beerahooda, sida quudinta, dareenka nabadgelyada, waxaa qaban doona hooyooyinka-qadhqadhaha. Caafimaadka hooyada lafteeda waa in si taxadar leh loola socdo si loo ogaado cudurkisa faafa iyo ilaalinta caruurteeda.
Marka ay duurjoogta yihiin, waxay u baahan yihiin inay bixiyaan heerkul +30 ° C 20 maalmood ee ugu horreeya nolosha. Kadib dhammaadka wakhtigaan, tilmaamayaasha heerkulka ayaa si tartiib tartiib ah hoos ugu dhacaya calaamadda + 20-22 ° C. Daryeelka waa in la qaataa si uu u ilaaliyo ducklings on diirimaad diiran, oo qotodheer. Maalin iftiin ah ka hor da'da shan bilood waa in si tartiib tartiib ah loo soo gaabiyo ilaa 10 saacadood maalintii. Marka ay gaaraan da'da 5 bilood, waxay sidoo kale u baahan doontaa in si tartiib tartiib ah loo kordhiyo ilaa 15 saacadood maalintii.
10 cisho ka dib ayaa ilmaha la quudiyaa oo la mid ah dadka waaweyn. Ilaa wakhtigaas, waxaa fiican in la siiyo walxo isku dar ah, lagu qaso caws, laga sameeyey ukun, jiis, caleemo, iyo masago. Toddobaadka ugu horreeya waxa la siiyaa 8 jeer maalintii. Kadibna tirada naas-nuujinta ayaa si tartiib-tartiib ah hoos loogu dhufto 4. Ku quudi cunto quudin ah. Kaluunka iyo cawska ayaa la siin karaa laga bilaabo toddobaadka toddobaad ee nolosha.
Waa muhiim! Ducklings waa in la quudiyo adoo ku daraya pellets, fitamiino iyo macdaneyaal cuntada muhiimka ah..
Carruurtu waxay isticmaali karaan biyaha laga bilaabo maalmaha ugu horreeya nolosha. Waad socon kartaa ducklings kadib marka ay jirayaan 20 maalmood. Haddii aad rabto inaad "bashkirok" ku abuurto gacan-qabsi ku-ool ah, markaa waxaad u baahan tahay inaad ogaato waxyaalahan soo socda:
mudada u dhaxaysa wakhtiga ukunta la dhigay iyo waqtiga la dhigey waa in aysan ka badneyn 5 maalmood;
kaydinta ukunta waxay dhacdaa heerkul ah + 9-13 ° C;
Ka hor intaan la dhigin ukumaha waa in si fiican loo baaraa loona tuuraa;
ukunta waa in lagu nadiifiyaa xal daciif ah ee kaneecada;
marka la gelinayo qandhada, heerkulka waa in la dhigaa at +38 ° S iyo qoyaanka 70%;
toddobaadkii labaad, waa inaad leexisaa ukunta 4 saacadood kasta; heerkulka muddadaas waxaa lagu hayaa 37 ° S, qoyaan - 60%;
laga billaabo 15-ka illaa 25-aad, ukumaha ayaa la qaboojiyey 20 daqiiqo laba jeer maalintii;
Ducklings ayaa dhasha ka hor maalinta 28aad.
Sidaa darteed, ducks Bashkir waa xulasho aad u fiican oo loogu talagalay kuwa doonaya in ay koraan shimbiraha, labadaba ujeedada ah helitaanka hilib tayo leh iyo hilib dhadhan leh, iyo hadafka ukunta, si ay u isticmaalaan iyo ganacsi. Daryeelka iyaga waa sahlan, uma baahna dhibaato kasta iyo xaalado gaar ah. Caafimaadka ee shimbirahan waa mid aad u fiican, iyo muuqaalka ay yihiin kuwo aad u soo jiidasho leh. Waxay ka tirsan yihiin jinsiyada hore, si dhakhso ah ayey u caawinayaan caanaha si ay u gaaraan himilada la rabay - in la keeno hilibka iyo ukunta.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Caleemaha dhasha 2019